Ike kinetiki: ụdị, nkọwa, usoro na ihe atụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | Ọzụzụ
O doro anya na ị gụọla akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ahụ ike na isiokwu physics. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịnụ ya na nyocha sayensị ma ọ bụ na mgbasa ozi. A na-ewere ya dị ka ezigbo ike maka ịmụgharị mmegharị nke ihe. E nwere ndị mmadụ na-edochabeghị echiche gbasara ike ike ma ọ bụ etu esi tụọ ma ọ bụ rụọ ọrụ. N’isiokwu a anyị ga-enyocha nkọwa na ịba uru nke ike a n’ụwa nke physics.
Chọrọ ịma ihe niile metụtara ike ike? Naanị ị ga-anọgide na-agụ iji mụta ihe niile 🙂
1 Gịnị bụ nkọwa nke kinetic energy?
1.1 Ụdị ike kinetic
2 Kedu ka esi agbakọ ume ike
3 Esemokwu esemokwu na osooso
4 Usoro kinyi ike
5 Kedu ihe na-adọrọ mmasị na ya?
6 Ihe omuma nke ike nile
Gịnị bụ nkọwa nke kinetic energy?
Mgbe a na -ekwu maka ụdị ike a, a na -eche na ume ụfọdụ a na -enweta na -ewepụta ọkụ eletrik ma ọ bụ ihe yiri ya. Ike kinetik bụ ume nke ihe nwere n'ihi na ọ na -emegharị. Mgbe anyị chọrọ ime ka ihe dị ngwa, anyị ga -etinyerịrị ya ike iji merie ike esemokwu ala ma ọ bụ ikuku. Iji mee nke a, n'ihi nke a, anyị na -ebugharị ike na ihe ahụ ọ ga -enwe ike ịkwaga na ọsọ ọsọ.
Ọ bụ ike a na-ebugharị ka a na-akpọ ike nkwenye. Ọ bụrụ na ume etinyere n’ihe ahụ na - abawanye, ihe a ga - eme osọ ike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị akwụsị itinye ike na ya, ya na ike esemokwu ya nwere ike belata ume ọrụ ruo mgbe ọ kwụsịrị. Ike kinetic na-adabere na oke na ọsọ nke ahu ruru na ihe. Ozu ndi pere mpe choro obere oru iji bido imeghari. Ngwa ngwa ị na-aga, ike ahụ gị nwere ume.
Ike a enwere ike ibufe ya na ihe di iche iche na n'etiti ha igbanwe n'ime ike ozo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ na-agba ọsọ ma na-adaba na onye ọzọ nọ na-ezu ike, akụkụ nke ike ike nke dị na onye na-agba ọsọ ga-enyefe onye nke ọzọ. Ike nke etinyere maka ngagharị ịdị adị ga-abụrịrị ihe karịrị ike esemokwu ya na ala ma ọ bụ mmiri ọzọ dị ka mmiri ma ọ bụ ikuku.
Ụdị ike kinetic
Typesdị abụọ dị iche:
Ike ntụgharị asụsụ ntụgharị asụsụ: bụ ihe na -eme ma ihe kọwaa ahịrị kwụ ọtọ.
Ike mmegharị kinetic: bụ nke na -eme mgbe ihe tụgharịrị n'onwe ya.
Kedu ka esi agbakọ ume ike
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakọ uru nke ike a, anyị ga-agbaso echiche a kọwara n'elu. Nke mbụ, anyị ga-amalite site na ịchọta ọrụ a rụchara. Ekwesiri ịrụ ọrụ iji nyefee ike ume na ihe ahụ. Ọzọkwa, ọrụ ahụ ga-aba ụba site na ike, na-atụle oke nke ihe a na-akwagharị n'ebe dị anya. Ike ga-adaba na ala ebe ọ dị, ma ọ bụghị na ihe ahụ agaghị agagharị.
Were ya na ị chọrọ ịkwaga igbe, mana ị na-agbanye ala. Igbe ahụ agaghị enwe ike imeri nguzogide nke ala ma ghara imegharị. Iji mee ka ọ kwaga, anyị ga-etinyerịrị ọrụ na ike n'akụkụ nke yiri ihu.
Anyị ga-akpọ na-arụ ọrụ W, ike F, oke ihe m, na ebe dị anya d.
Ọrụ ya na ike oge dị anya. Nke ahụ bụ, ọrụ a rụzuru dị ka ike etinyere na ihe ahụ na anya ọ na-agagharị na-ekele nke ike ahụ e tinyere. A na-enye nkọwa nke ike site na oke na ngwangwa nke ihe ahụ. Ọ bụrụ na ihe ahụ na-agagharị na ọsọ mgbe niile, ọ pụtara na ike a na-etinye n'ọrụ ya na ike esemokwu nwere otu uru ahụ. Ya mere, ha bụ ikike ndị a na-etinye na nguzozi.
Esemokwu esemokwu na osooso
Ozugbo uru nke ike a na-etinye na ihe ahụ belatara, ọ ga-amalite nwayọ nwayọ ruo mgbe ọ kwụsịrị. Ihe omuma di nfe bu ugbo ala. Mgbe anyị na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ awara awara, korota, unyi, wdg. Nke anyị na-akwọ ụgbọala na-enye anyị nguzogide. Nguzogide a bụ a maara dị ka esemokwu esemokwu n’etiti wheel na n’elu. Ka ụgbọ ala wee mụbaa ọsọ ya, anyị kwesịrị ịgba mmanụ ọkụ iji mepụta ike ọrụ ike. Iji ike a ị nwere ike imeri esemokwu ma bido ịkwaga.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị na ụgbọ ala na-agagharị ma anyị kwụsị ịgbalite ọsọ, anyị ga-akwụsị itinye ike. Enweghị ike ọ bụla na ụgbọ ala ahụ, ike esemokwu agaghị amalite breeki ruo mgbe ụgbọala ahụ kwụsịrị. N'ihi nke a, ọ dị mkpa ịmara nke ọma ikike ndị na-etinye aka na sistemụ iji mara usoro ihe ahụ ga-aga.
Usoro kinyi ike
Iji gbakọọ ike kinetic nwere ekike nke na-esite n'echiche eji mee ihe na mbụ. Ọ bụrụ na anyị maara ọsọ nke mbụ na nke ikpeazụ nke ihe ahụ mgbe njem dị anya, anyị nwere ike dochie osooso na usoro ahụ.
Ya mere, mgbe a na-arụ ọrụ net net na ihe, ego anyị na-akpọ ike kinetic k, mgbanwe.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị na ya?
Maka ndị dibia bekee, ịmara ike dị ike nke ihe dị ezigbo mkpa iji mụọ ike ya. Enwere ihe ndị dị na mbara igwe nke nwere ume ume nke Big Bang na-akwagharị na, ruo taa, ka na-agagharị. N'ime usoro mbara igwe enwere ihe ndị na-atọ ụtọ ịmụ ma ọ dị mkpa ịmata ike ike ha ịkọ amụma ha.
Mgbe anyị nyochachara nhatanha maka ume ike, enwere ike ịhụ na ọ dabere na ọsọ nke ihe nwere akụkụ anọ. Nke a pụtara na mgbe ọsọ gbakwara okpukpu abụọ, kinetik ya okpukpu anọ. Ọ bụrụ na ụgbọ ala na-aga 100km / h nwere ume okpukpu anọ karịa otu nke na-aga 50km / h. Ya mere, mmebi nke enwere ike inwe ọghọm ji okpukpu anọ karịa otu karịa nke ọzọ.
Ike a enweghị ike ịbụ uru na-adịghị mma. Ọ ga-abụrịrị efu ma ọ bụ ihe ziri ezi. N'adịghị ka ya, ọsọ nwere ike ịnwe uru dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma dabere na ntụaka. Mana mgbe ị na-eji ọsọ ọsọ, ị ga-enweta uru dị mma.
Ihe omuma nke ike nile
Ka anyị lee ụfọdụ ihe atụ nke ike ike iji mee ka o doo anya:
Mgbe anyị hụrụ mmadụ n’elu skuuta anyị ga-ahụ na ha na-enweta ahụmịhe mmụba ma na ike nwere ike mgbe ị na-agagharị n'ịdị elu na ike ike na-agba ọsọ ọsọ. Onye nwere oke ahụ ibu ga - enwe ike inweta ume ka ukwuu ma ọ bụrụhaala na skuuta ahụ na-enye ya ohere ịga ngwa ngwa.
Otu ite poselin dara n’elu ala: Typedị ihe atụ a dị oke mkpa iji ghọta ike ọrụ ike. Ike na-eto n'ime ahụ gị ka ọ na-agbadata ma wepụta ya kpamkpam mgbe ọ kwụsịrị site n'ịkụ ala. Ọ bụ ụfụ nke izizi malitere ike iwepụta ume ọrụ. A na-enweta ike ike ume ụwa fọdụrụ nke ike ike.
A kụrụ na bọl: bụ ikpe yiri ihe na-eme na ite ite ahụ. Bọọlụ dị jụụ na-achọta ikike na ike ọ na-amalite ịhapụ mgbe anyị kụrụ ya. Ibu arọ ma bukwuo ibu, bọl ahụ ga-arụ ọrụ karịa iji kwụsị ma ọ bụ bugharịa ya.
Mgbe anyị tụdara okwute: ọ na-eme n'ụzọ yiri nke ahụ na ite na bọọlụ. Ka nkume ahụ na-agbadata na mkpọda ahụ, ike ike ya na-abawanye. Ike ga-adabere na oke na ọsọ nke ọdịda ya. Nke a, n’aka nke ya, ga-adabere na mkpọda.
Gbọ ala na-agba ụgbọ ala: ogige ntụrụndụ bụ isi ihe na-akọwa ike ọrụ. N'elu igwe na-agba agba, ụgbọ ala ahụ na-enweta ume ike ka ọ na-ada ma na-eme ka ọsọ ya dịkwuo elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a echiche na ojiji ga-abụ nke doro anya karịa gị.
Chọpụta mgbatị a nke na-arụ ọrụ na ume ọrụ:
Mgbatị na-agagharị na ike mmetụta uche nke ndị mmadụ na CircuitoEco kpatara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Ọzụzụ » Ike kinji
O nyeghi m aka ma oli, ihe m choro bu ka m mata ka esi agbakota ike ike, ihe nile ederede siri, amaala m
Mee ihe n'eziokwu